Madaxweyne Xasan oo Airport Muqdisho kulan kula qaatey wasiir ka socda dalka Norway – idalenews.com
Kulankan ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehliyay Wasiirada Arrimaha dibada ahna Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Fowziyo Yuusuf, Wasiirka Maaliyada Maxamuud Xasan Suleymaan iyo saraakiil ka tirsan Xafiiska Madaxtooyada.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibada iyo Wasiirka horumarinta xiriirka caalamiga ee Norway ayaa heshiis kala saxiixday, markii uu kulanka soo dhamaaday, waxaana heshiiskan oo ah mid diblomaasiyadeed iyo iskaashi ay wada yeesheen labada dal oo ku saabsan dib u dhiska.
Shir jaraa’id oo ay si wada jir u qabteen Madaxweynaha iyo Wasiirka Norway ayaa waxay ka wada hadleen muhiimada heshiiskaas iyo sida lagama maarmaan u tahay in Soomaaliya dib u dhis lagu sameeyo.
“Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in Mr Holmes uu yimaado Muqdisho, tanoo tuseysa sida dalka Norway ay uga go’antahay in xiriirkii labada dal la soo nooleeyo oo heshiiskii maanta uu calaamad u yahay in Soomaaliya ay maanta si siman heshiisyo diblomaasiyadeed ula saxixianeyso waddamada horey u maray. Waxaan kaloo uga mahadcelinaynaa Norway geesinimada dheeraadka ah oo ay si toos ah (bi-lateral) ula shaqeyneyso dowladda oo ay si toos ah ugu soo gubinayaan kaalmadooda ku wajahan dib-u-dhiska dalka”ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa ka codsaday beesha caalamka inay ku daydaan Norway oo ay si toos ah ula shaqeeyaan dowladda Federaalka Soomaaliya si ay u sahlanaato in adeegyada bulshada loo fidiyo shacabka Soomaaliyeed.
Laakiin arrinta hadal heynta ah ayaa in Madaxweynaha uu garoonka diyaaradaha ugu tagay wasiir heerkiisu hooseeyay, isla markaana aheyd in Wasiir la heer ah uu la kulmo, waxayna taasi ku tuseysa sida madaxda dowladda aysan ula weyneyn xilkooda.
Madaxda dowladda ayaa inta badan garoonka diyaaradaha kula kulma diblomaasiyiin iyo mas’uuliyiin heerkooda hooseeya oo beesha caalamka ka socda, waxaana madaxda dowladihii hore lagu xusuustay in madaxda dalka imaaneysay lagu qaabili jiray Madaxtooyada, sida Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon oo Madaxtooyada Villa Somalia la geeyay markii uu garoonka ka soo degay.